Xayawaan Fekara! Qalinkii: Maxamed Baashe. |
Xayawaan Fekara! Qalinkii: Maxamed Baashe.
Waxa la yidhaahdaa “Aadmigu waa xayawaan fekera”! Taas macnaheedu waa “aadmiga iyo xayawaanka waxa kala sooca fekerka”! Nolosha aadmiga na waxa qaabeeya garaad ama caqli aan hadh iyo habeen feker ka nasan oo ku foogan gorfayn, oo soo jeeda. Waxa kale oo la yidhaahdaa “fekerku waa dhuuxa garaadka aadmiga nooleeya, garaadku na waa mucda nolosha aadmiga qaabaysa!” Qofka aadmiga ah waxa fekerkiisa qaabeeya oo ka dhiga mid si togan u fekera ama mid si taban u fekera dhawr isir oo isku xidhan oo kala ah:
1. Aabbaha iyo hooyada ama ciddii kale ee barbaarinta qofka iyo korintiisa lahayd ama leh
2. Ehelka iyo asxaabtiisa ugu dhodhow
3. Wadarta iyo bulshoweynta uu la nool yahay
4. Waxbarashada iyo dugsiga ama jaacamacadda uu wax ka baranayo
5. Warbaahinta iyo hannaan siyaasadeedka waddanka uu ku nool yahay iwm.
Isirradaas oo dhami siyaalo kala duwan bay saamayn wanaagsanaan karta ama xumaan karta ugu yeelan karaan qofka iyo si’ araggiisa iyo fekerkiisa. Waxa la yidhaahdaa wax kasta oo uu qofka arko ama la kulmaa waxa ay ku keeni karaan inuu wax iska waydiiyo, fiirfiiriyo, oo ka fekero.
Dareen iyo hiyi kac baa ku dhasha ka soo jeeda sidii uu fekerkiisu waxaas uu arkay uu ula falgalay, kaas oo ama tognaan kara ama tabnaan kara. Ficilo iyo dhaqaaq ayaa ka sii abuurma dareenka ama hiyi kacaas, kaas oo isna u hawl gala labada dhinac mid ahaan: Tognaan ama tabnaan, si kale, samaan ama xumaan. Had ba na sida uu u fekero ayaa noloshiisa saamayn weyn ku yeelata, horumar ama dib u dhac.
Nolosha dadku is ma beddesho illaa uu is beddelo hab-fekerkoodu. Ummadda dib u dhaceedu badan yahay ee horumarka nolosha ku liidata ama ka gaabisaa fekerkeeda ayaa u janjeedha xagga tabnaanta ama xumaanta, sidaas awgeed ayaa wax soo saarkeeda maskax iyo muruqeed na u dambeeyaan ama aanay u horumarsanayn. Ummaddaasi habaaska iyo boodhka kama kici karto illaa ay beddesho hab fekerkeeda, illaa garaadka iyo garashadeedu sida togan/wacan isu beddelaan. Waxa Iyana la tilmaamaa in marka hadiyo jeer si taban uun loo fekero waxa yaraa awoodda iyo kartida qofkaas ama qoomkaas. Tusaale ahaan qabaa’ilka Soomaalida qolo kastaa si taban bay uga fekertaa qolada kale. Fekerka iyo aragtida dadka garashada qabiilo iyo hiiladeeda ku dhaqmaa kala qabaan si kasta khurufaad iyo is moodsiis ba ha ahaato eh, hadda na waxa ka dhasha taag darro, midnimo la’aan iyo wax wada yeelasho la’aan baahsan. Cuqdad iyo cadaawad baa Iyana ka sii abqaalma.
Yurub oo maanta dunida aqoon iyo ilbaxnimo ugu tarsheegata oo ku hoggaamisaa shalayto waxa ay ka mid ahayd quruumaha ugu liita ee mugdiga ku nool. Kacaankii Wershadaha ee Yurub ka dhashay qarnigii 18aad wax ba kama horrayn dhinaca horumarka maaddiga ah. 1760-kii ayuu England ka bilaabmay oo Yurub ku fiday.
Kacaankani ma guulaysteen haddii aanu ka horrayn kacaan maskaxeed, kacaan fekerka ku salaysani. Qarnigii 14aad waxa Italy ka bilaabmay oo Yurub ku ballaadhay, kana hanaqaaday dhaqdhaqaaqii Renaissance la baxay. Dhaqdhaqaaq dhaqan buu ahaa oo fekerka ah. Indheergaradkii xilligaas ayaa keenada u hayey oo qaatay aratida Humanism: Dadnimaynta الإنسانية iyo doorka qofku nolosha ku leeyahay.
Waxa uu ahaa dhaqaaq horseed ka ah dib u dhalin fekerkii Giriiggii hore iyo hal -abuur cusub oo la halmaala dhismaha, siyaasadda, aqoonta sayniska, dhaqanka iyo suugaanta iwm. Waxa is beddel lagu sameeyey hab fekerkii qofkii Kiniisadda ku xidhnaa ee Baaderigu mar na aabbaha barakaysan u ahaa, marna wakiilka karaamaysan Alle uga ahaa. Kiniisadda ayaa caqabad ku noqotay horumarkii loo baahnaa. Waxa ay ku guulaysteen in ay kala saaraan iyada (Kiniisadda) iyo Dawlanimadii. Waa xilligaas marka Kacaankii Wershduhuna baallaha la baxay ee Yurub ku faafay, Reer Yurub aqoontii iyo horumarkii ay gaadheen na u horseedday in ay dunida kale ku duulaan oo addoonsadaan.
Innaga Soomaali haddaynu nahay waynu dambaynaa. Dib u socod baynu nahay. Sida aynu u fekernaa malahayga sax ma aha oo sida taban, sida xun. Dhaqdhaqaaq isbeddel oo hab fekerkeenna ku saabsan ayaa loo baahan yahay, hab dhaqankeenna nololeed, dhaqanka iyo gedaha si’ araggeenna ayaynu u baahannahay in aynu ka guurno oo beddelno.
Dib u dhalin feker oo aynu uga soo dhinbiil qaadanno Diinta Islaamka iyo Sunnaha Nebi Muxammed NNKH ayaa door yeelan kara. Qabiilka iyo Dawladda na in aynu kala saarno ayaa kaalin kale ciyaari kara. Haddii intaas la sameeyo oo hab fekerkeenna noloshu is beddelo iyada oo qaayo-soorka halbeeg ee aynu cuskanaynaa uu diinteenna yahay, Qabyaaladda/Qabiilka iyo Dawladda/Xafiiska na aynu ku guulaysanno in aynu kala fogayno, kala saarno, oo xaqa iyo xuquuqda siyaasiga ah ee muwaaddinku ka xorowdo u garbaduubnaanta qabiilka iyo qabyaaladda, waxa aan ku kalsoonahay in muddo yar gudaheed midabkeenna iyo ka dhirteennu ba is beddeli lahaayeen.
Lixdii bilood (2006) ee Midowgii Maxaakimtu Muqdisho ka shaqaynayeen iyo sida wax isu beddeleen ee Xamar Caddey u ekaatay iyo kala dambayntii beddeshay madax iyo minjo la’aantii waallida ahayd ee ka jirtay, waa tusaale nool oo maankayga ku dheehan, dad badan oo taariikhda dersa oo shisheeye u badanina ay weli ka faalloodaan, oo wax badan ka qoreen! Keiya waxa aan tusaalahan uga jeedaa in aynu ku baraarugno in qabiilka la jiidhi karo haddii aragti ka casriyaysan la keeno oo laga shaqaysiiyo. Maxaakiimtu waxa ay muddo yar dib ugu soo nooleeyeen Muqdisho oo luxudka iyo iilka jiiftay oo naqasku hayey sannado badan oo hawada mar kale neefsatay.